पुरानै राष्ट्र गान - परिहास - नेपाल
पुरानै राष्ट्र गान
थाइल्यान्डमा हालै सम्पन्न विश्व बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा पुरानो राष्ट्र गान बजाएकामा नेपाली जनता क्षुब्ध छन् । प्रतियोगितामा नेपालले स्वर्ण पदक जित्नेबित्तिकै सम्मान गरौँ भनेर राष्ट्र गान बजाएको त पुरानोवाला पो परेछ । धन्य भारतको राष्ट्र गान बजाएनछन् !
विश्व बडी बिल्डिङमा स्वर्ण पदक जित्नु हाम्रा लागि बडो खुसीको क्षण हो । तर त्यो खुसीको क्षण अवधिभर पुरानो राष्ट्र गान सुनेर बस्नुपर्‍यो । पुरानो राष्ट्र गान बजाएकामा नेपाली जनता आयोजकप्रति आक्रोशित छन् ।
हुन त, यस्तो बेला बजाउनुपर्ने नयाँ राष्ट्र गान नै हो । सायद आयोजकलाई लाग्यो होला, आखिर नेपालको राष्ट्र गान न हो, पुरानो बजाए पनि फरक पर्दैन । किनभने, नेपाल राष्ट्रमै परिवर्तन भएर नयाँ व्यवस्था आयो भनिए पनि चालढाल त जम्मै पुरानै छ । जस्तो कि, राजा हटेर राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपतिको आनीबानी पुरानै छ । एकात्मकता गएर संघीयता आयो, शासनको तरिका पुरानै छ । राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो, तन्त्रचाहिँ पुरानै छ । पुरानो व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था ल्याइयो, अव्यवस्था पुरानै छ । अब यी जम्मै कुरा पुरानै छन् भने राष्ट्र गान एउटा मात्र नयाँ भएर के काम ? होइन र ?